ROMIYAAN SEERA WARAANAA JALA JIRTI -
ROMIYAAN SEERA WARAANAA JALA JIRTI
bilisummaa December 15, 2016	Leave a comment
Kunoo, uummanni Oromoo waggaa tokko guutuu diddaa gabrummaa karaan qabsoo nagaatiin adeemsee jira. Kanaanis Gaafa Afrikaa bira kutee addunyaatti ofis, qabsoo isaas beeksifatee argama. Hardha gaazexoota addunyaa guutuu keessatti sonaan beekaman kanneen akka: “The New York Times”, “The Washington Post”, “The Guardian”, “The Times“, — faatu waayee Oromoo fi qabsoo isaa yeroo yeroon barreessaa jira. Dabalees raadiyoolee biyyalafaa kana irratti daran beekaman kanneen akka: “BBC, VOA, DW, NCC, Aljazera“, — faatu waayee qabsoo fi warraaqsa Oromiyaa dabarsaa jira. Mootummaan Wayyaanee qullaa isaa uummatoota fi saboota addunyaa fuuldura dhaabachaa jira jechaa dha. Kun kan sirriitti nutti agarsiisu dhiigni ijoollee fi uummata Oromoo inni akka galaanaatti lolaye sun bu’aa wayii malee, akka hin hafne. Haatahu malee, dhumaatii uummata Oromoo isa gaafa Irreechaa booda, qabsoon Oromoo karuma nagaatiin qofa akka tarkaanfachuu hin qabne hubanna. Dureewwan Wayyaannee sammuu isaanii isa akka yaaduuf uumame san, boollatti darbatan kun dirqumaan uummata Oromoo baldhaa fi saba Oromoo guddicha kana gara qabsoo hidhannootti dhiibaa jiru. Erga jarri qawwee bakka amantii ofii buufate kun fedhe: Oromoon qawweettis, eeboottis, gaachanattis, shimalatti sirriitti beeka. Ilmaan qeerransoota fi leencotaa gorra’anii, qeyee qeerransootaa fi leencotaa dhuunfatanii nagaan jiraachuun yoom argamaree?
Previous GALAASA DILBO AND DAWUUD IBSAA BATTLE FOR OLF LEADERSHIP!
Next Hundeeffama adda bilisummaa oromoo (ABO)